Cabdi Xaashi”Madaxweyne Farmaajo ma aqoonsana Aqalka Sare iyo Nidaamka Federalka” -
Home News Cabdi Xaashi”Madaxweyne Farmaajo ma aqoonsana Aqalka Sare iyo Nidaamka Federalka”
Cabdi Xaashi”Madaxweyne Farmaajo ma aqoonsana Aqalka Sare iyo Nidaamka Federalka”
Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa shir jaraa’id oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu ka sheegay in Madaxweyne Farmaajo uusan aqoonsanayn Aqalka Sare iyo Nidaamka Federaalka.
Shirka jaraa’id ayuu waxa uu ka sheegay guddoomiyaha Aqalka Sare in Madaxweyne Farmaajo uusan fahamsanayn in Somaliland ka maqan tahay nidaamka federalka maadaama aysan qeyb ka ahayn shirka ka socda magaalada Dhuusamareeb.
“Waxaan ka xumahay mudada uu jiray Aqalka Sare in madaxweyna uusan aqoonsanin, tixgelinin waajibaadka dastuurka siiyay Aqalka Sare, khilaaf kasta iyo wadahadal kasta oo dhexmara Dowladda Dhexe iyo Dowlad Goboleedyada, Aqalka Sare ayay tahay in uu dhexdhexaadiyo” ayuu yiri Cabdi Xaashi.
Guddoomiye Cabdi Xaashi ayaa sidoo kale waxa uu shirkiisa jaraa’id ku xusay in Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ee kasoo jeeda Gobolada Waqooyi ay u doorteen inuu noqdo Wakiilka Arrimaha Somaliland, maadaama uu yahay mas’uulka ugu sarreya ee kasoo jeeda halkaas ee ku sugan magaalada Muqdisho, uuna u joogo metelaada Somaliland.
Cabdi xaashi Cabdullaahi ayaa maalmo kahor Madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor ka dalbaday inuu ka qeyb galo Shirka Madaxda dowladda Federaalka iyo kuwa dowlad Goboleedyada uga furmay Magaalada Dhuusamareeb, in kastoo aan looga soo jawaabin dalabkaas.
Hadalka Cabdi Xaashi ayaa kusoo aadaya xilli maanta magaalada Dhuusamareeb uu shir uga furmay madaxda Federaalka, kuwa Dowlad Gobol
Previous articleFormer ECB chief Mario Draghi forms a new Italian government
Next articleRussia is striving to increase production of Sputnik Covid-19 vaccine abroad